Entsha! Kwi-Woods Hirafu, i-Niseko Yotei View 80sqm
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguTomoko
Ehlathini, kodwa i-5-10 min drive ukuya eHirafuzaka, Grand Hirafu, Park Hyatt Hanazono & Kutchan. I-15-min ukuya kwidolophana / idolophu yaseNiseko. Ifakwe ngokupheleleyo kwi-anti-virus efakwe kwi-80sqm suite ngomnyango wakho. Ipropathi ihleli kumhlaba oyi-700sqm kungekho sakhiwo nakuphi na ukujikeleza iidigri ezingama-360. Unokuyonwabela indalo engakhange ichukunyiswe, nokuba uthe cwaka okanye ukhwaza. Wonke umgangatho wokufudumeza uquka. igumbi lokungena eliza kusetyenziswa njengegumbi elomileyo. Akukho ngxaki yokucoca ikhephu ngeendawo zokupaka ezigqunyiweyo. Iinkonzo zoncedo lweelwimi ezimbini kwindawo xa zifuneka.
Ngokuxhomekeke kwixesha kunye nobude bexesha lokuhlala, sinikezela ngezaphulelo ezinkulu kunesetingi yezaphulelo ezizenzekelayo. Nceda uqhagamshelane noMamkeli malunga nesi saphulelo sikhethekileyo, kunye nexesha ojolise kulo lokuhlala.
Indawo entsha kraca ye-80sqm ixhotyiswe ngokupheleleyo ngezona zixhobo zitsha zekhaya ezinomgangatho ophezulu wokufudumeza.
Iwasha enkulu (11kg)/isomisi(6kg) kunye nefriji enemenzi yomkhenkce, kunye nesixhobo sokuhlamba izitya, i-oveni yobuchwepheshe obuphezulu kunye netapu yokucoca amanzi okusela kwikhitshi legranite-counter island, ikhona ukuhlala kwakho ixesha elide bekhululekile ngakumbi.
I-suite ibandakanya igumbi lokulala elikhulu, igumbi lokulala lesibini (igumbi lokuhlala lemidlalo yeqonga lasekhaya xa inani leendwendwe zabantu abadala libini okanye linabantwana), ikhitshi/indawo yokutyela enombono kaYotei, indawo yokungena eshushu/igumbi lokungena elisetyenziswa njengegumbi elomileyo, eli-1 elifudunyezwayo. igumbi lokuhlambela/isitya sokuhlambela (*iNqaku elibalulekileyo eli-1 ngezantsi), igumbi langasese eli-1 elishushu (*Qaphela 1 ngezantsi), kunye nomnyango wenkonzo yenkunkuma weeyure ezingama-24.
Iibhedi ezimbini ezingatshatanga okanye ibhedi enye yenkosi kwigumbi lokulala elikhulu. Xa igumbi lesibini lisetyenziswa njengendawo yokulala, ibhedi yomandlalo (ii) iyalungiswa (inokukhetha abantu abangatshatanga aba-2 okanye ukumkani omnye.)
Kukho i-couch yokulala encediswa ngombane etofotofo kwigumbi lesibini. Xa inani leendwendwe lilimbini, iya kuba yindawo yethiyetha yasekhaya edityaniswe nekhitshi/yokutyela, kwaye sinokumisela umthi womgunyathi weKrisimesi oyi-1.8M ngexesha leKrisimesi.
Akukho TV ngenxa yokungafumaneki kwemiqondiso yeTV emahlathini. Nangona kunjalo, ngalinye lala magumbi mabini lixhotyiswe nge-100+ intshi yeprojekti "popIn Alladin 2" onokubukela ngayo i-Youtube, i-TED kunye nemirhumo emikhulu onayo. INetflix, i-U-Okulandelayo, iRadiko kunye nabanye abantwana kunye neenkqubo zokuzilolonga azifuni mrhumo.
Ukuba uyanqwenela, ungazipholela, uncokole, okanye usele ngaphandle phantsi kwendawo yokupaka enkulu egqunyiweyo apho kumiselwe indawo yokuhlala ene-wifi. Unako kwakhona ukonwabela isandi somlambo obaleka emazantsi engxondorha ecaleni kwepropati.
Akukho zibane ehlathini ngaphandle kwezibane zale ndawo ebusuku ukuze ubone iinkwenkwezi ezininzi xa kucacile. Inyanga nayo intle. Ungalibali ukujonga phezulu esibhakabhakeni ebusuku.
Njengomlinganiselo we-COVID, iyonke i-suite yi-anti-virus egqunywe ebulala ngaphezulu kwe-99.8% yeentsholongwane zisebenzisa itekhnoloji ye-photocatalyst, ukongeza kucoceko oluqhelekileyo lwe-COVID. Inkqubo yokungenisa umoya ezenzekelayo isebenza iiyure ezingama-24 ngosuku.
"Ngesicelo sangaphambili, kwaye kuphela itheko leendwendwe ezine zabantu abadala, igumbi lesibini elongezelelweyo elingasetyenziswanga langasese / isitya sokuhlamba okanye / kunye negumbi lesibini elongezelelweyo lokuhlamba ekwabelwana ngalo "elingaphandle kwesuite kumgangatho wesibini" lingasetyenziselwa simahla. Nceda uqhagamshelane nombuki zindwendwe ukuze wenze esi sicelo kwangethuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Tomoko
Kukho i-intercom (10AM-11:30PM) esuka kwigumbi leendwendwe ukuze uqhagamshelane nomamkeli ohlala kumgangatho we-2. Ngezinye iiyure okanye nayiphi na imeko engxamisekileyo, nceda ukhalise intsimbi yomnyango womnyango wokungena (umnyango osekunene). Umamkeli-ndwendwe unokubonwa ngasemva kwendlu ukuze alinywe igadi ngamaxesha onyaka oluhlaza.
Kukho i-intercom (10AM-11:30PM) esuka kwigumbi leendwendwe ukuze uqhagamshelane nomamkeli ohlala kumgangatho we-2. Ngezinye iiyure okanye nayiphi na imeko engxamisekileyo, nceda uk…
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 北海道倶知安保健所 | 後保生第　1082　号指令
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$2634